Venerable Kusalasami: ကမ္ဘာကြီးက ရက်စက်တယ်တဲ့လား
short words (6)
အလွန်ပူနေသော တစ်ရက်က ဖြစ်ပါသည်။ အခန်းအပြင်ထွက်လို့ မနေနိုင်အောင် ပူသည်။ ခန်းစီးလိုက်ကာကို မကြည့်လိုက်တော့ ပြီးလုဆဲဆဲ ကျောင်းဆောင်သစ်ကြီးပေါ်တွင် အလုပ်လုပ်နေကြသူများကိုလည်း တွေ့နေရသည်။ ပူပြင်းလှသော နေရောင်အောက်တွင် ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်နေကြတာကို တွေ့ရတော့ စိတ်ထဲမှာ မကောင်း။ သို့ရာတွင် သူတို့မှာ အပေါ်က နေရောင်နဲ့ ပင်ပန်းနေပေမယ့် ကိုယ့်မှာလည်း နေပူသာ မခံရတယ်၊ ဂုတ်ကြောတွေ၊ ခါးတွေလည်း ညောင်းကိုက်နေပါသည်။ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ အပူတွေ ဒုက္ခတွေ ရှိနေတတ်ကြတာပဲဟု ဖြည့်တွေးမိသည်။
ကွန်ပြူတာရှေ့တွင် တကုပ်ကုပ် အလုပ်ရှုပ်နေစဉ် ကျောင်းသားတစ်ယောက် ပြေးလာသည်။ “ဦးဇင်း ဂျပန်မှာ ဆူနာမီ ၀င်နေတယ်”ဟု အမောတကော ဆိုသည်။ ရင်ထဲမှာ ထင့်ခနဲ ဖြစ်သွားသည်။ အင်တာနက်ကနေ ဘီဘီစီ ၀က်ဘဆိုက်ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ် လှိုင်းလုံးကြီးများက ဖူကူရှီးမားမြို့ကလေး တရကြမ်း ၀ါးမြိုနေသည်။ သင်္ဘောကြီးများပင် မြို့ထဲကို ဒလိမ့်ခေါက်ကွေး မျောပါနေသည်။ တံတားတွေ ပြိုသည်။ အိမ်တွေ ပျက်သည်။ လူတွေ သေသည်။ လူတွေ ငိုသည်။ သတင်းတွေ ကြည့်ရင်း ၀မ်းတွေ နည်းနေမိသည်။
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မည်သူတွေ အန်တုနိုင်ပါမည်နည်း။ ယနေ့ခေတ်ကို သိပ္ပံပညာခေတ်ဟု လူတွေ တင်စားပြောဆိုနေကြသည်။ အမှန်တကယ် တင်စားလောက်အောင်ပဲ သိပ္ပံပညာတွေ ထွန်းကားသည်။ ပူပြင်းသည့်နေရောင်အောက်တွင် အေးအေးလူလူနေလို့ ရအောင် အဲယားကွန်းတွေ ထွင်သည်။ ချမ်းအေးလွန်းသည့် အအေးဓာတ်ကို အန်တုဖို့ ဟိတာ(အပူပေးစက်)တွေ ဖန်တီးသည်။ နေရာတကာ စက်ပစ္စည်းတွေ ထွင်ပြီး လူတွေကို ကူညီသည်။ အချို့နေရာများတွင် လူအစား စက်ရုပ်(ရိုဘော့)များကိုပင် တီထွင်ခိုင်းစားနေကြသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။
ခရီးသွားလာရေး အဆင်ပြေဖို့အတွက် လေယာဉ်ကြီးတွေ ဖန်ဆင်းသည်။ သင်္ဘောကြီးတွေ ဖန်တီးသည်။ ဇိမ်ခံကားတွေ ထုတ်လုပ်သည်။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားတွင် တွေ့နေရသည်။ ခေတ်ပေါ်အသုံးအဆောင်များဖြင့် လူသားသည် လှပခန့်ငြား တင့်တယ်လှသည်။ သိပ္ပံပညာက ဖန်ဆင်းပေးလိုက်သည့်အရာများဖြင့် လူသားများ ၀င့်ဝါလို့ မဆုံး၊ ဂုဏ်ယူလို့ မကုန်၊ ၂၁-ရာစုမှာ လူဖြစ်ရတာ နတ်ပြည်မှာ နတ်သားပဲ ဖြစ်နေရသလိုလို ပျော်နေကြပုံရသည်။
စက်မှုပစ္စည်းများကို ဘိန်းစွဲသလို စွဲနေသော လူသားများကြောင့် စက်မှုပစ္စည်းတွေ တစ်နေ့တစ်မျိုး မရိုးရအောင် ထုတ်သူက ထုတ်သည်။ ဖြန့်သူက ဖြန့်သည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် လူသားသည် စက်မှုပစ္စည်းများ၏ ကျေးကျွန်ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၀ယ်လိုအားများလာသောကြောင့် စက်မှုပစ္စည်းများသည် တစ်နေ့တစ်ခြား အမျိုးမျိုး တိုးလာရသည်။ စက်မှုပစ္စည်းတွေ တိုးလာခြင်းသည် လူသားများအတွက် ကောင်းပါသည်။ သို့ရာတွင် စက်မှုပစ္စည်းတွေ တိုးလာလေလေ ကမ္ဘာကြီးမှာ အန္တရာယ်အတွင်းသို့ သက်ဆင်းနေလေလေ ဖြစ်နေသည်ကို လူသားများ သတိမမူနိုင် (သတိမူမိသော်လည်း အရေးမစိုက်နိုင်)ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
လူသားတို့ သုံးစွဲနေကြသော ကြွပ်ကြွပ်အိတ်များ၊ သိန်းသန်းချီနေသော ကားများမှ ထုတ်လွှတ်လိုက်သော လောင်စာဆီ အငွေ့များ၊ အဲယားကွန်းပေါင်းများစွာမှ ထုတ်လွှတ်လိုက်သော အပူငွေ့များ၊ လူတို့ စားကုန်သုံးကုန်များ ထုတ်လုပ်ပေးနေသော စက်ရုံပေါင်းများစွာမှ အခိုးအငွေ့များ…..ထိုအရာများသည် လူသားတို့အတွက် အဆင်ပြေကောင်းအဆင်ပြေနေနိုင်သော်လည်း ကမ္ဘာမြေကြီးကို စိတ်ပျက်စေပါလိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်၍ ကမ္ဘာမြေကြီးက ပြန်လည် ဒဏ်ခတ်သည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များမှာ ကမ္ဘာမြေကြီးက ဒဏ်ခတ်လိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
လူသားတို့သည် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အချိန်ရှိသရွေ့ ကမ္ဘာမြေကြီးနှင့် ကမ္ဘာ့လေထုကို နှိပ်စက်သည်။ ရက်ရက်စက်စက် ပြုမူသည်။ ကမ္ဘာမြေကြီး မကြိုက်သော အငွေ့များကို ထုတ်လွှတ်သည်။ ကမ္ဘာမြေကြီး ရွံရှာသော ကြွပ်ကြွပ်အိတ်များကို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ စွန့်ပစ်သည်။ လူသားတို့ တီထွင်ဖန်တီးလိုက်သော စက်ပစ္စည်းများမှ ထုတ်လွှတ်သော အငွေ့များနှင့် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အသက်ရှူကြပ်စွာ ရပ်တည်နေရသည်။ အိုဇုန်းလွှာလည်း ပေါက်ပြဲနေပြီ။ ကမ္ဘာမြေကြီးအနေဖြင့် လူသားများကို အသိဉာဏ်ရှိအောင် နိမိတ်အမျိုးမျိုး ပြသည်။ အယ်လ်နီညို၊ လာနီညာနှင့် ရာသီဥတုများ ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ပေးခြင်းဖြင့် လူသားကို အသိဉာဏ်ရှိအောင် ပြောပြသည်။ သို့ရာတွင် လူသားက အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့လျှက်ပင် ရှိလေသည်။ လူသားများ၏ ရက်စက်သော ဒဏ်ကို ကမ္ဘာမြေကြီးခမျာ ကြည်ရှည် သီးခံနိုင်စွမ်းမရှိ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အမှန်အားဖြင့် သဘာဝလောက ဤမြေကမ္ဘာသည် လူသားတို့အတွက် သူ့မှာရှိသမျှ အားအင်များဖြင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ထားသည်။ သို့ရာတွင် လူသားတို့ကား ကျေးဇူးတင်ရမှန်း မသိ။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် နေထိုင်ပြီး ကမ္ဘာကြီးကို လျစ်လျူရှုသည်။ နှစ်ကာလပေါင်း ထောင်သောင်းချီပြီး လူသားတို့သည် ကမ္ဘာကြီးအပေါ်တွင် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ ပြုမူဆက်ဆံခဲ့ကြသည်။ လူသားများအတွက်ရော၊ ကမ္ဘာကြီးအတွက်ပါ အန္တရာယ်အလွန်များလှသော အနုမြူများကိုပင် သူ့ထက်ငါ ဦးအောင် သာအောင် တီထွင်ဖန်တီးကြသည်။ ကမ္ဘာကြီးက ပညာအမျိုးမျိုး ပြသည်။ ထိုအခါ လူသားက ငိုကြွေးမြည်တမ်းသည်။ “ရက်စက်လိုက်တာ ကမ္ဘာကြီးရယ်”ဟူ၍။ ထိုအသံကို ကမ္ဘာကြီးက ကြားသောအခါ “တော်တော် တရားမျှတတဲ့ လူတွေပဲ”ဟုပြောရင်း ဟားတိုက်ရယ်မောနေခဲ့လေသည်။
By ashin kusalasami on March 19, 2011
ရယ် ပြီး မောရသော အဖြစ်များရလ်ပါ...
ဖြစ်လာမှတော့ ရင်ဆိုင်ရတော့မှာပေါ့လေ... စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာတော့ အမှန်ပါ...သမုဒယ ကြောင့်မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကြောင့် စိတ်မချမ်းမြေ့ဖြစ်မိတာ အမှန်ပါပဲ အရှင်ဘုရားရယ်..
Network For Green Myanmar said...
ဒီဆောင်းပါး ကိုတပည့်တော် သဘာဝ ပတ်ဝန်း ကျင် နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီမှာ http://www.net4greenmyanmar.com ပြန်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် ဘုန်းဘုန်း
မှန်ပါတယ်ဘုရား...ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာကြီးက ရက်စက်တယ်ဆိုတာထက် ငါးစာပဲမြင်ပြီး ငါးမျှားချိတ်ကိုမမြင်တဲ့ လူတွေရဲ့သဘာဝကြောင့်ပဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဘုရား...လူတွေအချင်းချင်း မေတ္တာတရားတွေ ခေါင်းပါးကုန်ကြတာလဲ ဘေးဆိုးကပ်ဆိုးတွေကျရောက်ခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဘုရား...ဇနိတံ ပါကံ ဇနေတိ မို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်နေရတုန်းပါဘုရား...အရှင်ဘုရားရဲ့ ဆိုဒ်ကို တပည့်တော် လင့်ခ်ယူသွားဖို့ ခွင့်ပြုပါဘုရား...
Click on photo to see biography in Myanmar ...
GUTLEUTSTR 127, 60327, FRANKFURT AM MAIN
Telephone: +4915214489565 Email: kusalasami@gmail.com
Venerable Kusalasami was born in 1981 at Pyawbwe Township, Mandalay Division. He was ordained asanovice at the age of 14th. From 1995 to 2001, he studied primary and elementary Buddhist education at several famous monasteries in Myanmar; Visuddharama monastery (Taungoo Township), Kankalay forest monastery (Oak Twin Township), Brahmanimmitarama monastery and Nyaung Tone Pali University (Yangon). At the age of 21st, he was ordained asaBuddhist monk.
In 2001, he passed the entrance examination and joined State Pariyatti Sasana University which is situated in Kabaraye hill, Mayangone Township, Yangon; in which he studied higher Buddhist education; B.A and M.A. In 1st and 2nd year, he passed with all distinctions in all of seven subjects and obtained 1st price. In 3rd year, 3rd price and final year 1st price again he finished successfully with flying colors. Within his education period, he sought many scholarships from that University.
In 2003 asastudent of State Pariyatti Sasana University, he set Sasanadhaja examination held by the Government and passed. That’s why he is awarded Sasanadhaja Dhammacariya degree which is equivalent to B.A by the Government.
In 2008, he went to Sri Lanka and joined Buddhist Study of Kelaniya University where he obtained M.A degree.
After finished M.A degree in Kelaniya University, he entered the Cittalapabbata forest that is second biggest forest in Sri Lanka and pracitsed Buddhist meditation in the cave for 60 days. Then he wroteabook in Myanmar language about his meditation experiences. Now he has already written many articles and published four books.
In 2010, he was invited by Dhammikarama Myanmar Chinese Buddhist Temple in Penang, Malaysia where he taught Buddhist meditation for one year. In 2012, he backed to Myanmar and established Dhamma School Foundation. Asageneral secretary of foundation, he opened hundreds of Dhamma School throughout Myanmar. In 2014, he was invited by Myanmar community in Frankfurt, Germany.
Now he is teaching Buddhist meditation, Abhidhamma and other basic Buddhist knowledge in Germany.
ဖိုရမ်စာရင်းပေးသွင်းရန်/Application for Forum
ဒုတိယအကြိမ် ဥရောပဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်ဖိုရမ် စာရင်းပေးသွင်းမည့် လူငယ်များအနေဖြင့်
အောက်ပါ လင့်တွင် သွားရောက်၍ ဖောင်ဖြည့်ကာ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ။
Anyone who are interested to join 2nd European Buddhist Youth Forum click the below link and read carefully. If you agree all mentioned there, can fill the form and apply.
ဤတွင် နှိပ်ပါ / Click Here
European Buddhist Youth Organization
မြန်မာနိုင်ငံ ရယ်ရွှင်ဖွယ် ဂိုဏ်းကွဲများ
OPENING CEREMONY OF GOLDEN PAGODA BELL TOWER
The young girl sentenced to death
ပီနန်က ကလေးမလေးများနှင့် စကားစမြည်
အိန္ဒိယက ထူးဆန်းတဲ့ ကလေးငယ်
Domain ကို ဓမ္မရံသီ ကိုမျိုး က ဒါနပြုသည်။
Welcome to the Kanni Foundation
အားကစားသတင်းများ ESPN Man U Fan livescore dvbsports eleven ဂျာနယ်များ myanmargoal world soccer news soccernews foxsports worldsoccer teamtalk guardian fifa soccer europe skysports
Honeymoon Packages for Couple in Lombok
Htet Aung Hlaing's Philosophy Diary
An Arakanese from Myanmar
abhidhama studies(Reserchs in Buddhist Psycology)
Avatamsaka Sutra-Book One (Complete)
damachakkapavattana sutta(Mahaci Sayadaw)
Eightfold Path Of The Householder
The Path to Arahaship
မရိဟာန ရဲစခန်းသို့ တစ်ခေါက်
dhamma talk audio
မျိးချစ်အာဇာနည် ဓနဉ္စာနီ (၀ါခင်းကုန်းဆရာတော်)
ပရိတ်ကြီး (၁၁)သုတ်နှင့်... (မစိုးရိမ်ဆရာတော်)
မိခင်ရွာက သာသနာ (၀ီရသူ)
အမျိုးအတွက်ဆို သေရဲတယ် (၁) (၀ီရသူ)
အမျိုးအတွက်ဆို သေရဲတယ် (၂) (၀ီရသူ)
အမြဲရှုံးနေသော ဘောလုံးပွဲ (၀ီရသူ)
အဆင်သင့်ပါစေ (၁) (၀ီရသူ)
အဆင်သင့်ပါစေ (၂) (၀ီရသူ)
သောတသိင်္ဂလီ (၁) (၀ီရသူ)
သောတသိင်္ဂလီ (၂) (၀ီရသူ)
သံသရာလွတ်ကြောင်းပြ သြဃတရဏသုတ္တန် (အနီးစခန်းဆရာတော်)
Haiku Poems of the Great Masters
Satori in Zen Buddhhism
Burmese-English Online Dictionary
Ashin Kusalasami likes
Dhammaduta Myanmar Buddhist Temple
Htet Kyain Aung
Gutleutstr 127, 60327
+49 152 14489 565
စာအုပ်ကို Download ရယူလိုပါက ပုံပေါ်တွင် ကလစ်နှိပ်ပါ
ဥ က္ကာ ကို ကို
Free Css Template;
မောင်မင်းစိုး(ရွှေနံ့သာ)၊ အခြေအနေအရ နေထိုင်ခြင်း
မြသန်းတင့်၊ လမင်းကို ထရံပေါက်မှ ကြည့်ခြင်း
မြသန်းတင့်၊ သမိုင်းစကား ပန်းစကား
မြသန်းတင့်၊ မှော်ရုံတောမှာ မောလှပြီ
မြသန်းတင့်၊ ကြာညိုနံ့သင်းသော ရေ၀တီမ
မြသန်းတင့်၊ သြဂုတ်တစ္ဆေနှင့် ၀တ္ထုတိုများ
မြသန်းတင့်(မောင်သာမည)၊ ၊ယက်ဖ်တူရှင်ကိုနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
မြသန်းတင့်(မောင်သာမည)၊ ယန်းပေါဆက်၏ ဖြစ်တည်မှုဝါဒ
မောင်မင်းစိုး(ရွှေနံ့သာ)၊ ပုလဲတစ်ကန့်၊ ရွဲတသန့်
ကိုတာ၊ လူငယ်တို့၏ အနာဂတ်စကားဝိုင်း
ကိုတာ၊ ရယ်ရွှင်ဖွယ်နှင့် အခြားစာတမ်းများ
ခင်နှင်းယု၊ ဘယ်သို့သော အကြောင်းကြောင့်
ဒဂုန်တာရာ၊ အိပ်မက်ဖြစ်ပါစေရှင်။ ကြည်အေး၊ အပြင်ကလူ
ဒဂုန်တာရာ။ ကြည်အေး။ စိမ်းမြညတစ်ည
ခင်မျိုးချစ်၊ ဆယ့်နှစ်လရာသီ ပန်းများနှင့်ပွဲတော်များ
ခင်မျိုးချစ်၊ ကိုင်း ပြောလိုက်စမ်းမယ်
ခင်မျိုးချစ်၊ ချစ်ဦးညို၊ လောကဇာတ်ခုံ၊ ဇာတ်ခုံလောက၊
မင်းခိုက်စိုးစံ၊ စိုမှာစိုးလို့ မိုးမိတယ်
အောင်သင်း၊ အနာဂတ်ကို မကြောက်နဲ့
ငါ့ဒိန်ခဲကို ဘယ်သူနေရာ ရွှေ့ထားလဲ
ကံချွန်၊ ကြားဖူးနားဝ ဟာသပုံပြင်များ
တာရာမင်းဝေ။ အရှေ့မြို့ရိုးမှ မိုးရေစက်များ
သိန်းဖေ။ ဟစ်တလာ၊ ချိန်ဘာလိန် ဘယ်သူမှားသလဲ
ဘုန်းနိုင်။ ရှားလော့ဒေ၀ီနှင့် ဘာသာပြန်ကဗျာများ
ပါရဂူ။ သူတို့အမြင် သူတို့အတွေး
သိန်းဖေမြင့်။ ငွေစိန် လှေလှော်ရင်း တက်ကျိုးခြင်း
သိန်းဖေမြင့်။ အရှေ့ကနေ၀န်းထွက်သည့်ပမာ ၁
သိန်းဖေမြင့်။ အရှေ့ကနေ၀န်းထွက်သည့်ပမာ ၂
Zawgyi-One (for 32 bit)
Zawgyi-One (for 64 bit)
ဖတ်စေချင်သော စာအုပ်များ (နိုင်ငံရေး)
မှတ်မိသမျှ ကိုအောင်ဆန်း၏ ကျောင်းသား ဘ၀
ဗိုလ်ချုပ်၏ လမ်းညွှန် (၇)ချက်
ဗမာ့ အောင်ဆန်း အပိုင်း (၁)
ဗမာ့ အောင်ဆန်း အပိုင်း (၂)
ဗမာ့ အောင်ဆန်း အပိုင်း (၃)
၁၉၃၀ - တ၀ိုက် မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်း (သိန်းဖေမြင့်)
ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ရပ်များ ပြက္ခဒိန် (၁၉၈၇ - ၁၉၈၈)
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ် ထူးခြားမှု ရက်စွဲမှတ်တမ်းများ
ရန်ကုန်ကိုကိုယ်လှုပ်သော ထို (၇) ရက်
၇ ဇူလိုင် ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံ
အာဇာနည်နေ့ (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုကြီး
အမှုအခင်းရှေ့နေနှင့် တရားခွင်ဟာသများ (ဦးကျော်ဇေယျ)
အမုန်းကြောင့်ဖြစ်သော စစ်ပွဲများ (ဂျူး)
လူရှင်သချိုင်းများအကြောင်း (နေလင်း.....အ က သ)
မဟာဗျူဟာမြောက် အကြမ်းမဖက်တိုက်ပွဲ (ရောဘတ်၊ အယ်လ်၊ ဟယ်လ်ဗီ)
ဒိန်းမတ်၊နယ်သာလန်(ရိုဆန်တရာ့စ်) ဂျူးဇနီးဂျာမန်အမျိုးသမီးတို့မှ နာဇီများကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်ခြင်း
ဖတ်စေချင်သော စာအုပ်များ (ဘာသာရေး)
အရှင်ဆန္ဒာဓိက၊ အချစ်ကံခေပေမယ့် အနှစ်ကျန်စေရမယ်
တစ်ယောက်တည်းနေ တစ်စိတ်တည်းထား၊ အရှင်ဆန္ဒာဓိက
မြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာ၊ ဇေယျာမောင် ဦးကိုလေး
မိမိသည်ပင် အကောင်းဆုံးပန်းပုဆရာ (သန်းငြိမ်းအေး)
၀ိပဿနာတရားအမေးအဖြေများ ၁၊ အရှင်ဆေကိန္ဒ
၀ိပဿနာတရားအမေးအဖြေများ ၂၊ အရှင်ဆေကိန္ဒ
ရတနာသုံးပါးကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်လာသူတစ်ယောက်အကြောင်း၊ ဆန်းလွင်
နိဗ္ဗာန်အယူအဆကို ထေရ၀ါဒရှုထောင့်မှ လေ့လာခြင်း
၀င်းသိန်းဦး၊ ရှေ့ဘ၀ နောက်ဘ၀ ဗုဒ္ဓမဝေဖန်
ရမည်းသင်း သီလ၀၊ ဗုဒ္ဓအံတော်သမိုင်း